Iche echiche nke oma n’ihe nile gha enye gi ndu obi uto. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Nchekwube na-eme ka anyị na-aga. Ọ na-enye anyị ume ịchere anya n’oge ọbụladị nsogbu. Na ndu, ihe agagh abu dika odibere. Allzọ niile ga-enwe ntụgharị mana anyị kwesịrị ịnọ jụụ ma merie ihe ndị ahụ niile na-abịa dịka ihe mgbochi.
Anyị ekwesịghị ịda mbà n’obi ma ọ bụ chee na ihe ọjọọ niile na-adabara anyị naanị. Lee anya gburugburu. Onye ọ bụla nwere nsogbu nke ya. Ma ndụ na-aga ije na ha ma na-achọta ọ joyụ.
Iji bie ndụ obi ụtọ na afọ ojuju, ọ dị mkpa na anyị nwere uche ziri ezi. Ọ na-eme ka anyị nwee ike ilepụ anya n'ihu na ime ihe ndị anyị na-agaraghị eche n'echiche.
Obi ike, mkpali na obi ime ihe oma puru ichetara anyi ihe nke anachoghi iche. Mgbe obi jọrọ anyị njọ, ọ bara uru mgbe niile iji echiche ọma na ndị ezigbo mmadụ gbara onwe anyị gburugburu.
Ha na-agba anyị ume ịnagide ihe isi ike anyị. Ọ bụrụgodị na anyị ahụghị ndị ọzọ nọ anyị nso, anyị ga-achọ onwe anyị ike iji merie nsogbu anyị. Ka oge na-aga, ike a na-abawanye ma na-eme ka anyị nwekwuo mkpebi siri ike.
Ọ bụrụ na anyị nwere echiche ziri ezi ma mụta ileba anya n'akụkụ dị mma nke ihe karịa, mgbe ahụ obi ụtọ ga-abịa n'ụzọ anyị. Anyị na-amụta inwe ekele na inwe ekele maka ihe anyị nwere. Anyị ji ihe akpọrọ ihe karịa ma na-enwe ọ moreụ karịa na ọ joyụ na ọ andụ na-abawanye ọtụtụ folda. N'ihi ya, anyị na-ahụ onwe anyị obi ụtọ na afọ ojuju na ndụ.
Quot kachasị ike mmụọ nsọ
Quotes Short Short kacha mma
Ihe niile na-ekwu
Obi ụtọ na Ndụsị Ndụ
Ndụ obi ụtọ na-ekwu okwu
Ezi uche M Quotes
Ezi echiche Mindset Quotes
Kwuru okwu nke ubochi
Tupu ị daa mbà, chee echiche ihe mere i ji nọrọ ogologo oge. - Amaghi ama
Anyị niile nwere nrọ na agụụ. Anyị niile chọrọ iru ihe mgbaru ọsọ ụfọdụ na ndụ na…
Na-echeta mgbe niile ka ị na-ama onwe gị aka ka ị gafee ihe nwere ntụsara ahụ, Nweekwuoro, mepụta karịa, nwee ahụmịhe. - Amaghi ama
Ma aka onwe gị bụ ihe dị oke mkpa na ndụ. Ọ ga - eme gị ike, ọ ga - akwadebekwa gị…
Naanị n'ihi na mmadụ na-achị ọchị mgbe niile apụtaghị na ndụ ha zuru oke. Ọchị bụ…
Mgbe mbọ toro ogologo, anyị na-ebipụ mbọ ọ bụghị mkpịsị aka. N’otu aka ahụ mgbe nghọtahie tolitere, belata ego gị, ọ bụghị mmekọrịta gị. - Amaghi ama
I ghapu ntu gi mgbe ha toro, obughi ya? Ever nwetachala mkpịsị aka gị? N'ezie ọ bụghị!…
Onweghi onye gha eme gi obi uto rue mgbe iwere onwe gi obi uto. - Amaghi ama
Onweghi onye gha eme gi obi uto rue mgbe iwere onwe gi obi uto. - Isi okwu ndi amaghi ama: